စွဲလမ်းမိတဲ့ ဝေဒနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » စွဲလမ်းမိတဲ့ ဝေဒနာ
Posted by etone on Aug 3, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Short Story | 32 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း အသံကြားတိုင်း မနေနိုင်ပါဘူး
စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုခံစားမှု ဖြစ်လာတိုင်း ရွာထဲဝင်ပြီးရေးဖြစ်တဲ့ အကျင့်လေးရှိတာမို့ ဒီတစ်ခါလည်း စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပြပြဝေဒနာစွဲကပ်နေတာကြောင့် မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲ ရွာထဲမှာ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်မလက်တလောခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာက စွဲလမ်းမှုဝေဒနာပါ ။
ဒီလိုဝေဒနာမျိုး စိတ်ထဲ ပြင်းပြင်းပြပြခံစားနေရတာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင် အံ့သြမိပါတယ် ။ စွဲလမ်းစိတ်နဲ့ ရူးချင်ချင်တောင်ဖြစ်နေမိတာ ပွင့်လင်းစွာနဲ့ ၀န်ခံပါတယ် ။
ပြောလျှင်တောင် ယုံကြမယ်မထင်ဘူး … ကျွန်မသူ့ကို တကြိမ်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပဲနဲ့ အသံကြားရုံနဲ့ စွဲလမ်းမိပါတယ် ။ သူ့ကိုစွဲလမ်းတယ်လို့ ပြောရမှာထက် … သူ့အသံကို စွဲလမ်းမိတယ်လို့ ပြောလျှင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ် ။ ကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မအတွက်တော့ …. လန်းဆန်းပျော်ရွှင်စိတ်ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အသံမျိုးပါ ။
သူ့အသံကြားရလျှင်ပဲ ရင်ခုန်နှုန်းတွေမြန်သွားပြီး ပျော်လာသလိုလို တဆက်တည်းခံစားမိပြန်တယ် …. ။ စိတ်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲစကားပြန်ပြောချင်စိတ်ဖြစ်မိပေမယ့် ….. အသိစိတ်က ပြန်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာကြောင့် …. စကားပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်းသာလုပ်ရလျှင် ၊ သူ့ကိုစကားပြောပြီး ကျွန်မသူ့ဆီက မျှော်လင့်နေတာကိုရယူမိမှာပါပဲ ။ သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် နဲ့ အသက်က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကမကျပါဘူး ။ လောလောဆယ်တွယ်ငြိမိနေတာ သူ့အသံကြောင့်ပါ ။
သူကလည်း အိမ်ရှေ့ကဖြတ်တိုင်း ၊ ကျွန်မကို အသံပေးသွားတတ်တော့ ၊ ကြားနေကြသူ့အသံ မကြားရလျှင်ပဲ ရင်ထဲဟာတာတာနဲ့ပေါ့ ။ ကျွန်မကလည်း အိမ်မှာ အချိန်ပြည့်မနေနိုင်တော့ သူ့အသံမကြားရတဲ့နေ့ဆို ၊ စိတ်ထဲတစ်ခုခုလိုနေသလိုပါပဲ ၊ ဘာမှလည်း မလုပ်ချင် ၊ ဘာမှလည်း စားချင်စိတ်မရှိပဲ …….. ပျော့ခွေပြီးသာ နေချင်ပါတော့တယ် ။ အိမ်ရှေ့ကဖြတ်တိုင်း အသံပေးသွားတာ ကျွန်မသူ့ကိုများ လှမ်းစကားပြောမလားလို့ မျှော်လင့်နေပုံတော့ရတယ် …. ။ သူ့အသံကြားရုံနဲ့ နားလည်ပါတယ် …. ကျွန်မလိုချင်တာကိုသာ ပြောလျှင် သူလည်းလိုသလောက်ပေးနိုင်မှာပါ ။
ကျွန်မကို ရူးတယ်ပဲပြောပြော ၊ ကြောင်တယ်ပဲ ပြောပြော ဒီနေ့တော့ သူ့အသံကြားရလျှင် အသိစိတ်တွေအားလုံးကိုခဏမေ့ပြီး ကျွန်မစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ၊ သူ့ကို စကားပြောလိုက်တော့မယ် ….. ။
ရင်တွေကွဲထွက်တော့မတတ် နှလုံးတွေတဆတ်ဆတ်ခုန်နေတယ် ….. စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ လက်ဖျား၊ ခြေဖျားလေးတွေတောင် အေးစက်ကုန်တဲ့ အထိပါပဲ …. ။ ဒီအချိန်ဆို သူလာတော့မယ် …….။
ဟော………. မျှော်လင့်ထားသလိုပဲ …… သူလာပါပြီ .. အဝေးကတည်းက သူ့အသံကြားရတယ် … တဖြည်းဖြည်း အိမ်နားရောက်တော့မှ … အချိန်ကိုက်ထွက်ပြီး အသံပေးပြီး လိုချင်တာ တောင်းလိုက်ပါတော့မယ် …
အိမ်ရှေ့က သူ့အသံကို ကျွန်မကြားပါပြီ ။ …. ပြတင်းပေါက်ကို ခြေဖျားထောက်ပြီး …. အားရ၀မ်းသာ အော်လိုက်မိပါတယ် …… ။
” ဗျို့…..ကုလား …. နွားနို့ တစ်ပိသာလောက်”
(ဒီရက်ပိုင်း အဆီတက်စေမယ့် အစားသောက်တွေ ရှောင်ဖြစ်နေတာကြောင့် နွားနို့နဲ့ ကြက်ဥရောပြီး ပူတင်းလုပ်စားချင်စိတ်ကို …. ချုပ်ထိန်းထားရလို့ပါ …. ။ နွားနို့ပို့တဲ့ ကုလား အသံကြားတိုင်း …. အဆီတက်မယ် .. အဆီတက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ..စားချင်စိတ်ကို မြိုသိပ်လာရာက …. ဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ်ပျက်ကို … ရွာသူားတွေ အပျင်းပြေရယ်မောရအောင် … ရေးမိသွားပါတယ် .. မှားတာချိယင် ၀ံဒါမိဘာ… ခွိခိ
ဟင်…feel တွေတတ်လာပြီးမှ ဘယ်လိ်ုဖြစ်ဒွါးရတာလဲ…ရင်ထဲအီစိမ့်စိမ့်ကြီးဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့တယ်…..
မအိတုံလေး ပူတင်းလုပ်စားတဲ့နေ့ ဧည့်သည်အဖြစ်လာလည်လို့ရလားဟင်။
ပင်လယ်ပျော်ရေ …. ရဟတ်စီးရတဲ့ ဖီလင်မျိုးလေး …စာဖတ်သူကို ဖြစ်စေချင်လို့ပါ …. ။
ဒီလိုပုံစံတူမျိုးလေး တစ်ခါရေးဖူးတယ် …. အဲ့တုန်းကလည်း ….. ပျော်စေချင်လို့ ရေးလိုက်တာပါပဲ …. ။
http://myanmargazette.net/49627/society-lifestyle/aha-jokes အပျိုကြီးရဲ့ အရွယ်လွန်အချစ်… ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ….
ကိုခင်ခရေ …. အဟီး … ကျွေးတော့ကျွေးချင်ပါတယ် …. ။ ဒါပေမယ့် … မနက်ဆို …. ခြောက်နာရီခွဲ အိမ်ကထွက်ပြီး …ညဆို ဆယ်နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်မှအိမ်ပြန်တတ်တာမို့ ….. ဧည့်သည်ဖိတ်ရင်တောင် .. အားနာနေ၇မယ့် အချိန်ဆိုတော့ … ဟီး …. ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အီးမေးလ်ကကျွေးပါမယ်နော် …ဟိဟိ
ရွာဝင်စက မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတဲ့ပိုစ့်လေးမို့ မှတ်မိတယ် ။ နောက်ရေခဲရေဘူးကို မရမကဖွင့်ရာကနေ အကိုနဲ့ အလွဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ပိုစ့် နောက်တခုက စင်ဂဲမားသား အဲ့ဒီ ၃ ပုဒ်အကြိုက်ဆုံးပဲ ။
ရွာထဲရောက်ခါစက ဆူးတို့ တုန်တုန်တို့ စာလေးတွေ တော်တော်ဖတ်ရတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
မမအိတုံရေ သွယ်ဝိုက်ပြီး ဟဿရသမြောက်အရေးအဖွဲ့ အတွက် ပထမဆုံးလက်မလေးထောင်သွား
ပါတယ်ဗျာ။အားရပါးရလဲ ရယ်မောသွားပါတယ် အမရေ။
ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ … ရယ်စေချင်လို့ ပျော်စေချင်လို့ ရေးတာ … ရယ်ရတယ်ဆိုလို့ … ၀မ်းသာပါတယ်နော် … ။
ညလေးအိတုန်ရေ အဆီတက်တာများကွယ်… ဒေါက်တာကိုကို တစ်ယောက်လုံးရှိနေတဲ့ဟာပဲဟာ
နွားနို့ သောက်တာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖွံ့ ဖြိုးကြီးထွားသန်မာစေလို့အခု ကျောင်းတွေမှာ နွားနို့ တိုက်မယ့် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေပြီဆိုလားဘဲ
ဆိုတော့ ညလေးအိတုန်လဲ ဆွဲသာဆွဲ
အမလေး ဂျီးဒေါ်ရယ် …
ရင်တွေ တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ဖတ်လိုက်ရတာ ..
တခွီးခွီးနဲ့ပဲ ရယ်လိုက်ရတော့တယ် ..
တော်တော် နောက်တဲ့ ဂျီးဒေါ် ..
ပြတင်းပေါက်ကို ခြေဖျားထောက်ပြီး …. အားရ၀မ်းသာ အော်လိုက်မိပါတယ် …… ။
အရင်တုန်းက မင်းသမီးကြီးမမို့ (မို့မို့မြင့်အောင်) ဆပ်စလူးစိန်လုပ်တုန်းကစတိုင်…
မင်းသားအလာ… “ကိုကို” ဆိုပြီး အားရ၀မ်းသာလှမ်းအော်ပုံနှင့်မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ရာဝယ်…
သူ့ရဲ့ ရုပ်ရည် နဲ့ အသက်က ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဓိကမကျပါဘူး ။ လောလောဆယ်တွယ်ငြိမိနေတာ သူ့အသံကြောင့်ပါ ။ ဆိုတော့ တော်တော် ကို စွဲလန်းနေပီ ပေါ့လေ တွေးလိုက်တာ ဟဲဟဲ- ပီးတော့ ဗျို့ကုလားတဲ့ ! ဟဲဟဲ- နောက်တာနော် !
ရသပို့စ်ပါဗျို့ ဘရာကြော် ပါပလာကြော်ပါ
ဒါကို အနက်ဖွင့်ရင် အောင့်အီးသည်းခံရာမှ မမျိုသိပ်နိူင်သော အရာအားဖွင့်ထွက်ခြင်း
ဖလန်း ဖလန်းထ ရသမြောက်ပါပေတယ် :mrgreen：
အတည်ပြောမယ်ဗျ နောက်ထပ် လေး ငါး ကြောင်းလောက် အထိ tempo ထပ်တင်လိုက်ပီးမှ ဒိထက်နည်းနည်းကောင်းတဲ့ ဟာသ အချိုးလေးများ ရေးချလိုက်ရင်ဖြင့်
အဒေါ်အီးတုံးရေ ၅၀၀၀ဗျ ၅၀၀၀ ဟိဟိ ပွိုင့်လည်းပါတယ်နော် …..
ဃိန် ဂိန် ကိန်
အဲဒီအသံရော ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ဒေါ်အီးဒုံး……။
ဟရေးးးးး ကန်းမလေးနော်
ကြံကြံဖန်ဖန် စိတ်ကူးလေးကို သဘောကျနှစ်ချိုက်မိပါကြောင်း
နောက်နောင်လည်း ယခုကဲ့ သို့မူကွဲလေးများ ဖန်တီးစေလိုပါကြောင်း
မထိတ်သာ မလန့်သာရှိလိုက်တာ ဒေါ်အိတုံရယ်…
ပူတင်းကယ်ပေလို့သာပေါ့ ဒေါက်တာရယ်လို့ ဆိုရတော့မည်ပေါ့..:)
တခုခုတော့ လှည့်ကွက်လေးလုပ်ပြီးရေးတော့မယ်လို့ မှန်းထားရဲ့သားနဲ့ကို
နွားနို့ နဲ့ ကြက်ဥရောပြီး ပူတင်းလုပ်ပုံလေး ရေးပေးပါလားကွယ် ။
အဘ အရင်ကလုပ်ဖူးတယ် ၊ မေ့သွားလို့ ။
ပွချင်ရင် ပေါင်မုန့် ချေထည့် ။
အောက်ခြေမှာ ညိုချင်ရင် သကြားရည်ထည့် တာတော့ မှတ်မိတယ် ။
ဟင် …လူနောက်… တူများက တဂယ် မှတ်လို့.. မုအပြည့်နဲ ဖတ်နေတာ…
လှည့်တော့မယ်လို့…ဒါပေမဲ့ ..ရိုဟင်ဂျာနဲ့ အဆုံးသတ်မယ်တော့မထင်မိဘူး…
လူနောက်ကြီး…. အပေါ်ပိုင်းလိုက် ဖတ်တုံးက ဖီလင်တွေတက်နေတာ.. ဗျုံးဆို…ပုတ်ချလိုက်တယ်။ ဟွန့်…..လူဆိုး..။
ကုလားရောင်းတဲ့ နွားနို့ဆို မသောက်တော့ဘူး..
ငွေစင် ပုလဲ ကရောင်းတဲ့ ဗမာ နွားနို့ဘဲသောက်တော့တယ်…
ဇာတ်လမ်းအစကနေ စိတ်ဝင်တစားနဲ့ တက်လာလိုက်တဲ့ဖီလင်က နောက်ဆုံးကျမှ နင်သွားတာပဲ…..
အမလေး… နွားနို့သီးလိုက်တာ… ဖလူး ခွီး ……..
စာဖတ်ပြီး နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်မလဲလို့ တွေးရင်း အရသာ ရှိတာ ဖြစ်သွားတာကိုး။
ကိုပါ ရဲ့ ချဉ်ပေါင် ဟင်း ကို စွဲလမ်းမှု က လက်တွေ့မကျဘူး။
တုန်တုန် ရဲ့ ပူတင်း ကို စွဲလမ်းမှု က လက်တွေ့ကျတယ်။
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဈေးသည်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် နွားနို့သည်လို့ မခန့်မှန်းလိုက်မိဘူး …
အရေးအသား ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် …
နောက်နေ့ကော အသံလာရာကို နားစွင့်နေတုံးဘဲလား ကောင်းမလေး။
မအိတုံရေ အကြံပေးတာပါ( အကျန်မဟုတ်ပါ)
”ဗျို့…..ကုလား …. နွားနို့ တစ်ပိသာလောက်”
လို့မရေးနဲ့လေ၊ ကုလားကို ကုလားလို့မခေါ်ရဘူးတဲ့
နွားနို့ထဲ ငါးသလဲထိုး ပါမပါလည်း ကြည့်ဦးနော့….
very very good အရမ်းကြိုက်တယ် စကတော့အချစ်ကြောင်းများဖွင့်ဟနေသလားမှတ်ရတယ်နောက်ကျတော့ရယ်နေရတယ် တကယ်ကောင်းတယ် ခုဖတ်နေတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးပျင်းနေတာ ခုဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရမှ ပဲအပျင်းပြေသွားတော့တယ် ကျေးဇူးပါမမအိရယ်။။